Sida loo soo ceshano Photos ka iCloud File kaabta - 2 Siyaabaha Available
2 Siyaabo Sahlan inuu ka soo kabsado Photos ka iCloud
"My iPhone (macruufka 9) la xaday. Waa nasiib in i dhan photos aan ayaa taageeray galay iCloud. Hadda waxaan u baahanahay inaan dib u soo ceshano sawiro ka iCloud gurmad file. Suroobi karaa waddo inuu ka soo kabsado sawiro ka iCloud gurmad file tan iyo markii Ma aan akhriyi karo arki photos Falanqeynta in gurmad iCloud faylka? " - Kevin
Waxba ma ahan wixii, haddii aad xoojiyaa sawiro aad u iCloud, markaas waxaad iyaga ku bogsan karaan iCloud gurmad file. Asal Waxaa jira 2 siyaabaha ay u soo ceshano sawiro ka iCloud gurmad file. Waa in aad dooratid mid ka mid ah in ay kugu habboon.
Xalka 1. Ladnaansho Photos ka iCloud toos on your computer (uma baahna iPhone, iPad ama iPod) Xalka 2. Soo Celinta Photos ka iCloud in aad qalab macruufka ah (waa in aad haysato qalab macruufka ah) Dhibaatooyinka sida dib u soo ceshano sawiro ka iCloud
Xalka 1. Ladnaansho Photos ka iCloud toos on your computer
Dadka ayaa laga badiyay iPhone, iPad ama iPod, ama kuwa haysta qalab macruufka dhaawacan, ama kuwa diyaar u ah inay iska ilaawaan qalab macruufka ah ee aalad Android, ka dibna ay isku daydo in Xalka 1, sababta oo ah sidan uma baahna macruufka kasta qalab, laakiin caawiyo in aad si toos ah uga iCloud gurmad file in computer soo ceshano sawiro. Maxaa dhan aad u baahan tahay waa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) .
Tallaabada 1 Ku rakib Wondershare Dr.Fone ee macruufka
Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer. Labada qeybood oo Windows iyo Mac ayaa diyaar u ah arrimo 9 qalabka 'files gurmad. Download mid sax ah sida ay nidaamka qalliinka of your computer ah. Waxaa Launch oo guji soo kabsado iCloud File kaabta.
Tallaabada 2 Download ku iCloud file gurmad aad u baahan tahay qalabka macruufka
Saxiix in la xisaabtaada iCloud. Barnaamijkan marnaba xusuusan doonaa ama ururinaa macluumaadkaaga account iCloud. Markaas oo dhan iCloud files gurmad Halkan lagu soo bandhigi doonaa. Dooro mid ka mid ah ay ku jiraan sawiro aad rabto in aad dib u soo ceshano iyo dejisan. Daaqadda pop-up ka, si loo badbaadiyo waqti ay ku soo bixi gurmad iCloud faylka, waa in aad doorato in aad kala soo bixi sawiro ka Roll Camera iyo Photos App (photos soo bixi via barnaamijyadooda kale).
Tallaabada 3 ceshano sawiro ka iCloud
Riix badhanka Scan ku saabsan barnaamijka si scan gurmad iCloud ku file u sawirada aad u baahan tahay. Waxaa laga yaabaa in aad dhowr daqiiqo qaado dhammayn scan haddii aad leedahay kumanaan sawiro taageeray in gurmad iCloud faylka. Marka scan ay ka badan tahay, guji Roll Camera iyo App Photos siday u kala horreeyaan in ay ku eegaan oo dhan ka helay sawiro. Fiiri kuwa aad u baahan tahay oo guji Ladnaansho yaal dhinaca midigta hoose si loo badbaadiyo, kuwaas oo sawiro ka iCloud gurmad file si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Ka dib markii sawirrada sanaanayaa ka iCloud gurmad file, waxaad isku dayi kartaa Lugood ama Wondershare TunesGo in haddana sawiro kuwaas oo si aad qalab macruufka ah (macruufka 9 taageeray).
Xalka 2. Soo Celinta Photos ka iCloud in aad qalab macruufka ah (waa in aad haysato qalab macruufka ah)
Haddii aadan rabin in software kasta inuu ka soo kabsado sawiro ka iCloud gurmad file, ka dibna aad jeceshahay inaad u soo celiyaan qalabka macruufka ka iCloud faylka gurmad taas oo ka kooban sawiro aad. Haddii ay sidaas tahay, hubi talaabooyinka soo socda:
Fiiro gaar ah: ka hor inta photos celinta ka iCloud gurmad file in aad qalab macruufka ah, waa in aad ogaataa in wax walba oo ku saabsan qalabka macruufka hadda laga tirtirayaa. Halkii, goobaha jir ah iyo sawiro ku giringiriya Camera mar xoojiyaa si file iCloud ee la soo celin doonaa qalab macruufka ah. Haddii aad qabtid qaar ka mid ah xog muhiim ah, waxaan u malaynayaa in aad si fiican isku dayi lahaa xal 1, ama isticmaal TunesGo Wondershare in ay gurmad u dibna in la sameeyo dib u soo kabashada.
Tallaabada 1 macruufka u macruufka dambeeyay Cusboonaysii 9 version
On aad macruufka qalab, Settings tuubada> General> Software Update. Haddii aad macruufka ma ugu dambeeyay ee macruufka 9 version, update ka heli karaa halkan jooga. Riix rakib Hadda iyo raac tilmaamaha si ay u rakibi ku saabsan qalabka macruufka.
Tallaabada 2 Check in file gurmad iCloud waa la heli karaa ama ma
Tubada Settings> iCloud> Kaydinta & kaabta. Fiiri hoose ee suuqa kala si aad u hubiso in ay gurmad la filayo iCloud waxaa ama ma aha. Guud ahaan, haddii aad samaysay gurmad ah, waa ay jiraan.
Tallaabada 3 ceshano sawiro ka iCloud gurmad file
Settings tuubada> General> celi> masixi content oo dhan iyo goobaha. In ku xigeenka Mudanayaasha, u tag Calan qalab> tuubada Soo Celinta ka kaabta ah> tagaan si ay Dooro gurmad. Laga soo bilaabo liiska, dooran filayo iCloud gurmad file ay u soo celiyaan qalabka macruufka. Ka dib markaas, waxaad arki doonaa in dhammaan sawiro aad taageeray in iCloud mar kale ku saabsan qalabka macruufka.
Dhib sida dib u soo ceshano sawiro ka iCloud
Su'aasha 1aad: Waxaan lahaa iPhone cusboonaysiiyey iyo ka dib waxaan isku dayay in la soo celiyo aan iPhone la 9.5GB iCloud gurmad file. Si kastaba ha ahaatee, waxa aan shaqeyn si sax ah. Waxaan kaliya u hesho qayb ka mid ah sawiro aan laygu soo celiyey meeshaydii iPhone. Inta kale oo kaliya luntay. Chine Qaar ka mid ah xitaa ma soo celin. Jawaab: Sida ugu wanaagsan ee looga fogaado dhibaato tan la usingWondershare Dr.Fone ee macruufka in gurmad iCloud faylka iskaan, sawiro saarida ka iCloud gurmad file iyo iyaga badbaadiya on your computer. Mise waxaad isku dayi kartaa sidan (waxtar u leh dadka qaar ka mid ah): isticmaali Wall xeedho ah si ay u ururiyaan aad iPhone (ka hortagga u hagaagsan itune), Settings tuubada> General> celi> masixi content oo dhan iyo goobaha, soo celinta aad iPhone ka iCloud gurmad file, Open Photos app aad iPhone iyo arko sawirada mid ka mid ah-by-ka mid ah (ha taaban aad iPhone) duuban.
Su'aasha 2aad: Markii aan isku dayay in uu soo celiyo sawiro ka iCloud in aan iPhone, waxaan helay oo dhan sawirada jeestay cawlan Roll Camera. Waxa ay u muuqatay in ay ahayd in habka loading, sidaas darteed waxaan ha ku shuban habeenkii oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, subaxdii dambe, sawiro, kuwaas oo weli waa cawlan. Jawaab: Marka aad ogaato in dhammaan photos soo celiyay ka iCloud gurmad file waa cawl, aad u baahan tahay inay hesho sawirka hal-by-ka mid ah dhowr ilbiriqsi ha ku shuban si sax ah .
Su'aasha 3aad: Waxaan dhumiyay iPhone, sidaa darteed waa inaan mid kale ku iibsadaan. Dhibaatada waxa ay tahay in gurmad iCloud ku file waa mid aad u weyn in la soo celiyo on cusub iPhone. Sidee ayaan u soo ceshano xogta, gaar ahaan photos, xiriirada, iyo fariimaha ka iCloud gurmad file, si aan baan u lumiyo? Apple yiri ma jirto wax aan sameyn karo si ay u helaan gurmad iCloud faylka. Jawaab: Haddii aad iCloud gurmad file waa ka weyn tahay awoodda aad macruufka qalab ee, markaas aad uma soo celin kartaa qalab macruufka la. Laakiin weli waxaad fariimaha qoraalka ah, sawiro, xiriirada ka faylka gurmad ka heli kartaa haddii aad isku daydo shaqada - kabsado iCloud gurmad file in Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Ka dib markaas, waxaad dooran kartaa sawiro doonayo, fariimaha qoraalka ah, iyo xiriirada si ay u dhoofiyaan si aad u computer.
Sidee inuu ka soo kabsado SMS ka Android Phones
Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada ka Android
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Xogta laga Samsung
Sida loo Soo Celinta ka kaabta iCloud
Jidka A Free dib u soo ceshano fariimaha qoraalka ka kaabta iPhone
Sidee Si aad dayactir Common iCloud nidaameed Arrimaha?
3 Siyaabaha Bedelka iCloud Xiriirada in ay Android
Sida loo dhoofiyo iCloud Xiriirada in CSV File
> Resource > iCloud > Sida loo soo ceshano Photos ka kaabta iCloud